कलियुगका कुरा: नेता बोलीमा एकछिन पनि अडिग हुन्नन्
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड षड्यन्त्र र जालझेलको अर्को नाम भएको आरोप एमाले नेता माधव नेपालले लगाए ।
'प्रचण्डजस्तो जीवन साथी रोजिएछ खोई के भन्नु, स्वार्थका लागि जसले जोसँग पनि साँठगाँठ गर्न सक्छन । अहिले सबै पछुताई रहेका छन् । मुलुक चर्को द्वन्द्व र जातीय, क्षेत्रीय कलहमा फसेपछि बाँकी पनि पछुताउँछन् ।' उनले भने - 'प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको माया छैन । प्रचण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूला षड्यन्त्रकारी भएर निस्किए।'
Surya Shrestha, बसन्त बस्नेत, Rajan Kuikel and 53 others like this.
अनुपम नेपाली अमित काठमाडौका माइक्रो वा बसको दैनिक यात्रु Journalist from Nepal now with BBC 'SAJHA SAWAL'
Banjade Ganesh Prasad नेता!!!!!!!!!!!!! हास्नु पर्ने होइन रुनु पर्ने बेला आएको छ ।
Banjade Ganesh Prasad Dipak Bhattarai (@dipakbhattarai) on Twitterहोइन दिपक सर यो आइडी पनि खोल्नु भएछ । अब उतैतिर ब्यास्त हुने होला तपाईं फेस्बुक मा निम्तो छ है हा हा हा हा
Amrit Nhehang Rai रहस्य त बल्ल पो खुल्यो। किन हजुर फेसबुकमा न आको.
Bhojendra Basnet घोचपेच त दामी गरेका थिए नि यहाँ छ उनको घोचपेचको रामकहानी...
एमाले नेता नेपालले भने - 'प्रचण्ड इतिहासकै षड्यन्त्रकारी भएर निस्किए'
जेठ १०, काठमाडौं - नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकीकृत नेकपा माओव...See More
Samir Pokhrel माधव कुमार कति नै गतिलो मान्छे हो र ...
Thapa Arjun · Friends with Bhashkar Mallick
neta ko mati fuske ko chha ni ta tai bhayera ni heheheeh
Biplav Man Nepali Chor chor Mauseri vai.